Daawo Sawir laga sameeyay Wasiirada Xukuumada Somalia oo Baakad lagu sido iyo R/Wasaaraha oo yaaban!! - Wargeyska Faafiye
Kaartooniistaha Soomaaliyeed ee Amin Caamir oo inta badan looga bartay soo bandhigida Sawirada ka turjumaya Siyaasada Soomaaliya, ayaa markan soo saaray Sawir layaab wata oo ka turjumaya Wasiirada la filayo in lasoo magacaabo oo kartoono lagu wato.Sawirka waxaa ka muuqda Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh , Faarax Cabduqaadir iyo Shariif Xasan oo kartoon mid kasta uu ku wato wasiirada uu rabo in lagu soo daro liiska Golaha Wasiirada ee la filayo in dhawaan lasoo magacaaabo.
Waxaa sidoo kale Sawirka Amin Arts sameeyay uu ka turjumayaa in Liiska Golaha Wasiirada ay qeyb ku leeyihiin Wadamada Dariska la ah Soomaaliya, kuwaa oo iyana soo gudbinaya magacyada xubnaha ay rabaan in lagu soo daro Golaha wasiirada si ay dantooda ugu fushadaan.
R/Wasaaraha Cusub ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo isna warqad cad meel la fadhiya ayaa la yaaban Wasiirada nin walbo wato ee la doonayo in lagu soo daro Golaha Wasiirada Xukuumada uu soo dhisayo.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsMaraykanka: Xisbi mucaarad ah oo dalbaday in codadkii laga dhiibtay Winsconsin dib loo tiriyo.Turkiga oo dhisaya xarunta baarlamaankaInterracial marriage still new in Somali community in Minnesota .Tribal attacks wrench South Sudan as disarmament startsGeneral Mohamad Ali Samatar Liable for Crimes Against Humanity